Lutris: mpanjifa lalao havaozina sy tsara ho an'ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Lutris: mpanjifa lalao havaozina sy tsara ho an'ny GNU / Linux
Araka ny hitantsika tao amin'ny famoahana vao 2, ny iray amin'ny GameHub ary ny iray hafa momba Itch.io, ny fanolorana vahaolana (mpanjifa / sehatra) ho an'ny lalao ao amin'ny GNU / Linux mihalehibe izy ary mihamatanjaka. Ary ilay angano Lutris dia eo, amin'ny hazakazaka hanao GNU / Linux tena tsara Operating System ho an'ny mpankafy ny lalao video.
Lutris, toy ny hafa mpanjifa lalao ho an'ny GNU / Linux, manome fidirana mora amin'ny katalaogy goavambe sy mitombo lalao video, avy amin'ny konsol na Retro, an-tserasera, na taloha sy maoderina, mpitovo na marobe. Ary izany, ao amin'ny sampana ankehitriny (0.5.X) mamela anao hihazakazaka amina lalao amin'ny interface iray ary mampiditra fivarotana hafa toa Goga y Steam, mba hanafarana ny tranomboky lalao misy anao sy ny script fametrahana efa ilaina.
Araka ny fanazavana, amin'ny fomba tsotra ao a lahatsoratra teo aloha momba an'i Lutris, hoy ny fangatahana dia:
"Sehatra filalaovana misokatra ho an'ny Linux novolavolaina tao amin'ny python 3, izay ahafahantsika mametraka sy mitantana ny lalao mifanentana amin'ny Linux amin'ny fomba tsotra sy avy amin'ny tontolo iaraha-miasa. Ity fitaovana ity dia manolotra fanampiana ho an'ny lalao Linux tompon-tany ary koa ny emulator sy lalao Windows izay azo tanterahina amin'ny fampiasana divay. Toy izany koa, manana fanohanana malalaka amin'ny Playstation, lalao Xbox izy, ankoatry ny hafa.".
fa, Lutris tsy tsotra izany Mpanjifa Desktop ho an'ny lalao, nefa koa manana tranokala ofisialy izay miasa a magazay (tsena) fampiharana sy / na lalao, izay mifanaraka amin'ny fampiharana client desktop, ho avelao, hanamora sy hanafaingana ny fanaingoana sy ny fametrahana ireo lalao Amin'io. Tena amin'ny fomban'ny Steam.
1.1 Inona i Lutris?
1.2 Fampisehoana sehatra
1.3 Fametrahana fampiharana
1.3.1 Fametrahana amin'ny alàlan'ny terminal
1.3.2 Fisoratana anarana kaonty an-tserasera
1.3.3 Fampiasana Lutris
1.3.4 Mametraha lalao
1.3.5 Lalao mihazakazaka napetraka
Inona i Lutris?
Lutris dia mpanjifa birao sy sehatra filalaovana ho an'ny loharanom-baovao misokatra for GNU / Linux, izay manamora ny asan'ny filalaovana amin'ny alàlan'ny fitantanana, ny fametrahana ary ny fametrahana tsara indrindra ny lalao.
Tsy mivarotra lalao i Lutris. Manome fidirana amin'ny lalao maimaim-poana, misokatra ary maimaim-poana. Ho an'ny lalao ara-barotra dia tsy maintsy manana kopia ianao hametrahana ilay lalao Lutris. Ho fanampin'izany, ny sehatra dia mampiasa programa antsoina "Mpihazakazaka" Mba hanombohana ny lalao, Ireo broker ireo (ankoatry ny Steam sy ny tranokalan'ny tranonkala) dia omena sy tantanan'i Lutris, noho izany dia tsy mila apetrakao amin'ny manager manager anao.
Ny fotodrafitrasa Lutris mandeha ho azy tanteraka amin'ny alàlan'ny soratra, izay azo soratana ao JSON na YAML. Ny kaonty azo avela dia azo noforonina tao ny tranonkala ofisialy ary mampifandray azy ireo amin'ny mpanjifan'ny Lutris. Io dia ahafahan'ny mpanjifanao mampivadika ho azy ny tranomboky fikarohana ao amin'ny pejy web. Amin'izao fotoana izao dia azo atao ny mampifanaraka ny kaonty (tranomboky) an'ny Steam miaraka amin'ny tranombokin'i Lutris.
Ilay mpanjifa an'ny Lutris mitahiry marika fotsiny izy rehefa mifandray amin'ny tranokala ianao, ary ny antontan-taratasinao dia tsy voatahiry mihitsy. Mampiasa ny soratra, afaka milalao ny lalao ianao fa tsy mila fanamboarana tanana. Ary farany, Lutris dia tohanan'ny vondrom-piarahamonina 100%, mba hiantohana ny fampandrosoana hatrany ny tetikasa, noho izany misokatra hatrany amin'ny fanomezana mivantana na amin'ny alàlan'ny Sehatra Patreon.
Ao amin'ny ampidiro ny fizarana ao amin'ny tranonkala ofisialy de Lutris, azonao jerena tsara ny fomba fametrahana isan-karazany ho an'ny isan-karazany GNU / Distros Linux. Amin'ny tranga misy antsika, toy ny mahazatra dia haseho ny fametrahana MX Linux 19.1 (DEBIAN 10.3).
Eo ambanin'ny Fomba fametrahana sy fampiasana an'i Lutris:
Fametrahana amin'ny alàlan'ny terminal
Fisoratana anarana kaonty an-tserasera
Lalao mihazakazaka napetraka
Araka ny hitanao, ny fametrahana sy ny fampiasana ny Lutris Tsotra be izy io, ary ny katalaogin'ny lalao maimaim-poana, misokatra ary maimaim-poana dia tsy vitan'ny lehibe fa mitombo ihany koa noho ny fanohanan'ny mpandrindra lalao video sy ny «Comunidad de Software Libre y Código Abierto». Ary raha mila fanazavana fanampiny momba Lutris ny tranonkala ofisialiny dia azo idirana ao amin'ny GitHub.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Lutris nohavaozina sy tena tsara «Cliente para juegos» momba ny Rafitra miasa malalaka sy misokatra, izay manana sehatra tranokala tena tsara sy lalao maro karazana koa, dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Lutris: mpanjifa lalao havaozina sy tsara ho an'ny GNU / Linux
Tsara raha manohana programa
Eny, mahafinaritra be izany.
Monado, sehatra loharano misokatra ho an'ny fitaovana zava-misy virtoaly
Eto ny kinova vaovao Go 1.14 ary ireto ny vaovaony